China 321 ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe rụpụta na ụlọ ọrụ | Huaxiao
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere 321 / 321H Na-ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara , 321 / 321H HRC
321 Otu ọkwa si na ọkwa mba dị iche iche
321 Chemical mpaghara ASTM A240:
C：.008 ，Na ：≤0.75 Mn ：≤2.0 ，Kr ：17.0～19.0 ，Ni ：9.0～12.0，　S ：.0.03 ，P ：≤0.045 N: 0.1, Ti: 5X (C + N) Nkeji～ Ogologo
321H Chemical mpaghara ASTM A240:
C：0.04～0.1 ，Na ：≤0.75 Mn ：≤2.0 ，Kr ：17.0～19.0 ，Ni ：9.0～12.0，　S ：.0.03 ，P ：≤0.045 N: 0.1, Nke: 4X (C + N) Min～ Ogologo
321 / 321H n'ibu onwunwe ASTM A240:
Nkọwa banyere 321 / 321H igwe anaghị agba nchara na iji tụnyere 304 nkịtị
Ma 304 na 321 bụ 300 usoro igwe anaghị agba nchara ma ha enweghị obere ọdịiche na nkwụsị corrosion. Otú ọ dị, na ọnọdụ na-eguzogide okpomọkụ nke 500-600 Celsius, a na-ejikarị ihe igwe anaghị edozi 321. Tụkwasị na nke ahụ, e mepụtara ígwè na-eguzogide okpomọkụ n'ụzọ pụrụ iche na mba ọzọ ma kpọọ ya 321H. Ihe carbon ya nwere dị ntakịrị karịa nke 321, nke yiri nke ụlọ 1Cr18Ni9Ti. A na-agbakwunye Ti nke kwesịrị ekwesị na igwe anaghị agba nchara iji melite nguzogide ya na corrosran. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na n'oge mbido mmepụta nke igwe anaghị agba nchara, n'ihi na teknụzụ na-agbaze adịghị oke iji belata ọdịnaya carbon na nchara, ọ ga-ekwe omume inweta nke a site na ịgbakwunye ihe ndị ọzọ. Site na ọganihu nke teknụzụ, ọ ga-ekwe omume ịmepụta obere carbon na ultra-carbon-carbon steel nchara. Ya mere, ejirila ihe 304 mee ihe n'ọtụtụ ebe. N'oge a, njirimara nke nguzogide ọkụ nke 321 ma ọ bụ 321H ma ọ bụ 1Cr18Ni9Ti pụtara.
304 bụ 0Cr18Ni9Ti, 321 dabere na 304 gbakwunyere Ti iji meziwanye nsogbu nke intergranular corrosion.
321 igwe anaghị agba nchara nke Ti dị dị ka ihe na-eme ka ọ kwụsie ike, mana ọ bụkwa ụdị nchara dị ọkụ, dị mma karịa 316L na ogo dị elu. 321 igwe anaghị agba nchara na organic asịd nke dị iche iche ndọta, dị iche iche okpomọkụ, karịsịa na oxidizing ọkara Ezi abrasion eguzogide, na-eme ka linings na erute ọkpọkọ maka eyi na-eguzogide acid containers na eyi na-eguzogide ọgwụ na ngwá.
321 igwe anaghị agba nchara bụ Ni-Cr-Mo ụdị austenitic igwe anaghị agba nchara, ya arụmọrụ bụ nnọọ yiri 304, ma n'ihi na mgbakwunye na nke dara titanium, o nwere a mma iguzogide ọka ókè corrosion na elu okpomọkụ ike. N'ihi mgbakwunye nke titanium dara, ọ na-achịkwa njikwa nke chromium carbide n'ụzọ dị irè.
321 igwe anaghị agba nchara nwere magburu onwe nchegbu Rupture arụmọrụ na elu okpomọkụ na-eguzogide (Creep Nguzogide) nchegbu n'ibu Njirimara dị mma karịa 304 igwe anaghị agba nchara.
Osote: 410 410s na-ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara